Unkcenkceshelo lwedriphu yasekhaya: iimpawu, izibonelelo kunye nendlela yokwenza | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukunkcenkceshela i-drip yenye yeenkqubo eziphambili kakhulu ezikhoyo kwezolimo. Sonke esinesitiya okanye isitiya sasekhaya sifuna ukuba siphumelele kwimeko entle. Ke ngoko, sinokuyila Unkcenkceshelo lwedriphu yasekhaya ngokufanelekileyo. Yenye yeendlela zokunkcenkceshela ezikhoyo nezinokuthi zenziwe ekhaya ngezixhobo esingazisebenzisi njengesiqhelo.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba kufuneka wakhe njani unkcenkceshelo lwedriphu yasekhaya kwaye zeziphi izibonelelo zalo.
1 Izinto eziluncedo zonkcenkceshelo lwedriphu
2 Iinkqubo zokunkcenkceshela ekhaya
2.1 Iibhotile ezinomngxunya
2.2 Ityhubhu ye-PVC okanye intambo kwikepusi
2.3 Ibhotile ebumdakeni ngaphandle kwekepusi
2.4 Unkcenkceshelo nge-Solar Home Drip Irrigation
Izinto eziluncedo zonkcenkceshelo lwedriphu
Siza kubona ngamnye ngamnye onke amancedo zokunkcenkceshela drip:
Ukusebenza kakuhle: umphunga wamanzi, ukumpompoza komphezulu kunye nokugqobhoza okunzulu kuncitshisiwe kwaye kupheliswe ukuba sisebenzisa inkqubo yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela. Kwaye kukuba iyilwe kakuhle, ilawulwa kwaye igcinwe ine-95% yokusebenza ngokukuko. Ukongeza, kuyanceda ukufaka inani elincinci lokunkcenkceshela elinokuvumela izigqibo ezifanelekileyo malunga nemveliso.
Ixesha lesivuno: kwizityalo ezahlulwe ngokubanzi kukho iqhezu elincinci lomthamo womhlaba elinokunyinyiswa ukunciphisa ilahleko yamanzi engeyomfuneko xa unkcenkceshelwa.
Gwema ukugcwala kwamanzi kunye nezondlo: Xa amanzi ehla ngokuwa, izakhi-mzimba azifakwa kumaleko anzulu. Oku kubaluleke kakhulu ukuba sifuna ukugcina imihlaba nezityalo zethu zisempilweni.
Ukufana okukhulu ekusetyenzisweni kwamanzi: xa unkcenkceshela ngedriphu siphucula ukufana kuko konke ukunkcenkceshela kwaye kungakhokelela kulawulo olungcono lwamanzi, izondlo kunye neetyiwa zezimbiwa.
Yandisa imveliso: Kukho iindlela ezahlukeneyo zokunceda ezandisa imveliso kunye nokuzinzisa izityalo ebusweni bemozulu eyahlukileyo.
Iphucula impilo yezityalo: Ngombulelo kolu hlobo lokunkcenkceshela, zimbalwa izifo ezinxulumene nokungunda ezenzeka ngenxa yezityalo ezomileyo.
Uphuculo kulawulo lwezichumisi kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi: Oku kuyasichaphazela kakhulu ukuba sifuna ukuba negadi yasekhaya esezidolophini ngaphandle kokufaka isichumiso okanye izibulali zinambuzane.
Ukulawulwa kokhula okungcono: Ukunkcenkceshela i-drip kunceda ukunciphisa ukukhula kokhula kunye nokukhula kuba amanzi ajolise kwizityalo. Kuyanceda ukunciphisa kakhulu yonke imizamo yokulawula ukhula.
Ivumela ukudala isityalo esiphindwe kabini: Ndiyabulela kule nkqubo yokunkcenkceshela ekhaya, iya kuvumela ukuhlwayelwa kwesityalo sesibini kwaye iphucule amathuba emveliso.
Ezenzekelayo: Ukunkcenkceshela kungazenzekelayo ukuze ungazi kakuhle isivuno.
Ukonga umbane: Nakuphi na ukonga amanzi kuya kunciphisa nakweyiphi na indleko zamandla.
Ixesha elide: Masingakulibali ukuba inkqubo yokunkcenkceshela yekhaya okanye yedriphu ingaba nobomi obude ukuba iyilwe ngokufanelekileyo.
Iinkqubo zokunkcenkceshela ekhaya
Ngokuqinisekileyo yonke imihla silahla inani elikhulu leebhotile zeplastiki ezingasasebenziyo. Ezi bhotile zinokusetyenziselwa ukwenza inkqubo yokunkcenkceshela yokunkcenkceshela elula kakhulu. Sifuna kuphela ibhotile enkulu kangangoko kunokwenzeka ukuze ibe nayo amandla aphezulu, into ebukhali, kunye neentambo ezibhityileyo okanye iityhubhu. Ngale nto uza kuba nayo yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukwenza inkqubo yokunkcenkceshela ekhaya.
Makhe sibone ukuba zeziphi iintlobo ezahlukeneyo ezikhoyo:
Kubandakanya ukwenza imingxunya kwisiciko sebhotile ngokunqunqa indawo yayo esezantsi kwaye uyifake ujonge ezantsi emhlabeni, kufutshane. Kuya kufuneka siqhagamshele uhlobo lombhobho oya kuxinana ngamanzi. Yinkqubo esebenzayo kwaye iluncedo, ngakumbi ukuba uza kuba kude nekhaya ixesha elide.
Ityhubhu ye-PVC okanye intambo kwikepusi
Sinokuyila inkqubo yokunkcenkceshela eyenziwe ngokwakho ngokwenza umngxunya kwikepusi kwaye sifake intambo yokugcwalisa ibhotile yamanzi. Yinkqubo efanelekileyo kakhulu eya kuthi isincede songe isixa esikhulu samanzi kuba isenza ukuba iingcambu zifunxe amanzi kancinci.
Ibhotile ebumdakeni ngaphandle kwekepusi
Enye yeendlela ezilula kunye neyona isebenzayo. Kufuneka senze imingxunya emincinci ebhotileni, sisuse ikepusi kwaye siyibeke emhlabeni nkqo. Siyabulela koku, sinokufumana ibhotile yamanzi kwaye silinde apha kancinci kancinci ukunkcenkceshela izityalo zethu. Yinto eyahlukileyo yenkqubo yokunkcenkceshela ekhaya enomdla kakhulu ukuyisebenzisa kwizitiya nakwigadi yasekhaya.
Unkcenkceshelo nge-Solar Home Drip Irrigation
Le nkqubo intle kakhulu kwaye siza kuyisebenzisa amandla elanga kuyo. Kulula ukuvelisa kwaye ivumela ukuba songe amanzi amaninzi. Ukwenza oku, kufuneka sisebenzise iibhotile ezimbini zamanzi, enkulu inomthamo weelitha ezi-5 okanye nangaphezulu kwaye encinci inokuba ziilitha ezi-2. Siza kuhamba inyathelo nenyathelo sichaza yonke into ekufuneka uyenzile ukwenza oku kunkcenkceshela kokunkcenkceshela:
Sithatha ibhotile enkulu kwaye siyinqumle kwisiseko, ngelixa encinci isikwa kwisiqingatha.
Inxalenye esezantsi yebhotile encinci yile isetyenziselwa ukubeka ngqo emhlabeni. Enkulu iya kubekwa ngaphezulu ngendlela yokuba, xa uvula ikepusi yebhotile enkulu, amanzi ondiswe kule incinci.
Zombini iibhotile zizakubekwa ecaleni kwesityalo esifuna ukusinkcenkceshela. Umgama akufuneki ubemkhulu kakhulu ukuze kungabikho luhlobo lokubaleka luhleliyo. Ukungancedi kolu hlobo lwenkqubo yokunkcenkceshela ekhaya kukuba ayisebenzi ukuba umhlaba unamathambeka.
Inkqubo isebenzisa amandla avela elangeni ukukhupha amanzi kwaye iqondise apho sinomdla khona. Xa imitha yelanga ijolise ngqo kwibhotile, ubushushu bomoya bunyuka, bubangele amanzi abe ngumphunga. Emva koko, umoya ongaphakathi kwezi bhotile uyakuhlutha ukufuma kwaye amanzi ayajixa ezindongeni zeebhotile. Njengoko sisazi, amathontsi amanzi aya esiba makhulu ngakumbi kwiindawo apho kukho ngumphunga oqhubekayo. Ngokuya bekhula, banzima ngakumbi kwaye baphela betyibilika phantsi kweendonga zeebhotile bade bagqibe ukusasaza umhlaba obangqongileyo.
Ndiyathemba ukuba ngale ngcaciso ungafunda ngakumbi malunga nendlela yokwenza inkqubo yokunkcenkceshela ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Unkcenkceshelo lwedriphu yasekhaya